शब्दकोश: February 2012
तिमीसँगको होली पो होली !
चुपचाप - चुपचाप
न तिमीले सङ्कोच मान्ने
न मलाई धक लाग्ने ।
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, February 28, 20127: Comments
- शिवरात्रि लाइभ -
वागमती कुलकुलाएको आवाज सुन्न के पाइन्थ्यो ! ऊ नै च्याट्ठिई-“हात समात न हौ, म हराउँछु के !” उसको मुख हेरेँ, कलिलो काँक्रामा कसैले चक्कु घिसारे जस्तै देखियो ।
भीडमा उसको झर्को बोलीले सुटुक्कै मैं पो हराइदिऊँ कि जस्तो झोंक पनि नचलेको होइन । तर हामी त जीवनसाथी पो त भन्दै साथमा रहने मैच्याङलाई पशुपतिको भीड देख्दैमा झिंजो मानेर कसरी पो छाड्न सक्थेँ र ?
तर हातै समातेर त के हिंड्नु गाँठे, अप्ठेरो लाग्यो । कसैले देख्‍ला, नदेख्‍ला भन्दा पनि आफ्नै हेराइमा यस्तो हर्कत अलि विचित्र लाग्छ । तर पश्‍चिमा संस्कृतिको बैशाखीमा रत्तिँदै आएकी स्वरूपा त्यस्तै छे, उसलाई सब कुरा जायज लाग्छ । स्वरूपा यसैले रूपसँगै जीवनशैलीको हिसाबले पनि झिलिमिली छे । उहिले उताको संस्कृतिलाई बैशाखी बनाएर रमाई, अहिले यो भीडमा मलाई बैशाखी बनाउन खोज्दैछे ! “केटीहरूको कुरो बुझ्न सकिन्न ब्रो”, कसैले भनेको थियो कुन सर्कोमा । ठीकै भनेको रै’छ त्यो जैरेले । अहिले दिव्य ज्ञान पलाए जस्तो भयो ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, February 23, 20125: Comments
रत्‍न दाइ, लेखकीय अहम् र धुपौरे
कमलपोखरीमा छ्‌याप्पै एक पाटो ओगटेर बसेका थापा खलकमध्येको एउटा घरमा पुगिरहन मन लाग्छ । कवि-गीतकार रत्‍न शमशेर थापा निवास । नक्सालको डेराबाट यसो टहलिंदै जान सकिने भए पनि एक-डेढ वर्षको अन्तरालमा मात्र बल्लतल्ल झुल्किन पुग्दो रहेछु त्यहाँ । तैपनि रत्‍न दाइको कुनै गुनासो, दु:खेसो छैन । जतिसुकै अन्तरालमा जुनसुकै बेला पुगे पनि ‘ल, भाइहरू आएको बेला’ भन्दै साहित्यिक र सांगीतिक दुनियाँका विभिन्न ऐतिहासिक सन्दर्भहरू खुबै डुबेर सुनाउँछन् दाइले । सम्पदाका रूपमा ती किस्साहरू समेट्न लोभलाग्दो बन्ने गर्छ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, February 20, 20122: Comments